Kuma ayaa ku guuleysan doona laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or? – Geelle Mag
Kuma ayaa ku guuleysan doona laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or?
Ali Ahmed Posted On December 2, 2019
Magaalada Paris ee Caasimadda alka Faransiiska ayaa caawa marti-gelin doonta xafladda lagu bixinayo abaal-marinta laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or.
Tani waxa ay noqon doontaa markii 64-aad oo abaal-marintan la bixiyo, waxaana markii ugu horreysay la guddoonsiiyay Sir Stanley Matthews sanadkii 1956-kii, halka markii ugu dambeysayna la guddoonsiiyay Luka Modric, isagoo kaga guuleystay ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo abaal-marintan wadaagayey 10-kii sano ee ka horreysay 2018, iyadoo mid kastaana uu ku guuleystay min shan goor.
Waxaa la bixin doonaa abaal-marintan marka ay caawa saacadda Geeska Afrika tilmaameyso 9:30 daqiiqo, waxaana marti-gelin doonta Magaalada Paris, iyadoo lagu qaban doono Theatre du Chatelet.
Marka la eego xafladda abaal-marinta sanadkan 2019-ka lagu bixinayo Magaalada Paris waxaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysto Xiddiga Lionel Messi markiisii lixaad, isla markaana uu ku garaaci doono daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk.
Xiddiga reer Holland ayaa kaalin mug leh ka qaatay kooxda Jurgen Klopp tan iyo markii uu kaga soo biiray Southampton bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii, waxaana uu ka caawiyay inay ku guuleystaan markoodii lixaad Koobka horyallada Yurub ee Champions League-ga.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga Barcelona wuxuu ku guuleystay abaal-marinta FIFA Best ee Ragga bishii Sebtember ee sanadkan, isla natiijadan ayaa la filayaa inuu markale gacanta ku dhigo caawa abaal-marinta Ballon d’Or.
Duqa Muqdisho oo Magacaabay Guddoomiyeyaal Cusub